Akụkọ Bible: Chineke Ekwe Nkwa Iweta Paradaịs - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NKE A bụ foto paradaịs, nke ọ pụrụ ịbụ na Chineke gosiri Aịzaya onye amụma ya. Aịzaya dịrị ndụ mgbe na-adịghị anya Jona nwụsịrị.
Paradaịs pụtara “ubi” ma ọ bụ “ogige.” Ọ̀ na-echetara gị ihe anyị hụrụla n’ime akwụkwọ a? O yiri nnọọ ogige ahụ mara mma nke Jehova Chineke kere maka Adam na Iv, ó yighị ya? Ma, ọ̀ dị mgbe ụwa niile ga-abụ paradaịs?
Jehova gwara Aịzaya onye amụma ya ka o dee ihe banyere paradaịs ọhụrụ ahụ na-abịanụ bụ́ nke e mere maka ndị Chineke. Ọ sịrị: ‘Anụ ọhịa wolf na nwa atụrụ ga-ebikọ n’udo. Ụmụ ehi na ụmụ ọdụm ga-atakọ nri, ụmụntakịrị ga na-elekọta ha. Ọbụna agwọ na-ata ata agaghị emerụ nwa ọhụrụ ahụ́ ma ọ bụrụ na ọ na-egwuri egwu n’akụkụ ya.’
Ọtụtụ ndị ga-asị: ‘Nke a apụghị ime eme. Nsogbu adịwo mgbe niile n’ụwa, ọ ga na-adịkwa.’ Ma chegodị echiche banyere nke a: Olee ụdị ebe obibi Chineke nyere Adam na Iv?
Chineke debere Adam na Iv n’ime paradaịs. Ọ bụ naanị n’ihi na ha nupụụrụ Chineke isi mere e ji chụpụ ha n’ebe obibi ha ahụ mara mma, ha akaa nká, ma nwụọ. Chineke na-ekwe nkwa inye ndị niile hụrụ ya n’anya ihe ahụ Adam na Iv tụfuru.
N’ime paradaịs ọhụrụ nke na-abịanụ, ihe mgbu agaghị adị, ihe agaghịkwa na-emebi. Udo ga-adị n’ụzọ zuru ezu. Mmadụ niile ga-enwe ahụ́ ike na obi ụtọ. Ọ ga-adị nnọọ dị ka Chineke chọrọ ka ọ dị na mbụ. E mesịa, anyị ga-amụ banyere ụzọ Chineke ga-esi mee nke a.
Aịsaịa 11:6-9; Mkpughe 21:3, 4.
Ònye bụ Aịzaya, olee mgbe ọ dịrị ndụ, gịnịkwa ka Jehova gosiri ya?
Gịnị ka okwu bụ́ “paradaịs” pụtara, gịnịkwa ka ọ na-echetara gị?
Gịnị ka Jehova gwara Aịzaya ka o dee banyere Paradaịs ọhụrụ ahụ?
N’ihi gịnị ka e ji chụpụ Adam na Iv n’ebe obibi ha mara mma?
Gịnị ka Jehova kwere ndị hụrụ ya n’anya ná nkwa?
Gụọ Aịsaịa 11:6-9.
Olee otú Okwu Chineke si kọwaa udo nke ga-adị n’etiti ụmụ anụmanụ na ụmụ mmadụ n’ụwa ọhụrụ ahụ? (Ọma 148:10, 13; Aịsa. 65:25; Ezik. 34:25)
Olee otú okwu Aịzaịa si na-emezu n’ụzọ ime mmụọ n’etiti ndị Jehova taa? (Rom 12:2; Efe. 4:23, 24)
Ònye ka e kwesịrị inye otuto maka mgbanwe ụmụ mmadụ na-agbanwe àgwà ha ugbu a nakwa mgbanwe ha ga-agbanwe àgwà ha n’ụwa ọhụrụ ahụ? (Aịsa. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)
Olee otú Akwụkwọ Nsọ si egosi na ihe mbinyere Chineke ga-ebinyere ụmụ mmadụ pụtara bụ na ọ ga-anọnyere ha n’ụzọ ihe atụ n’ụwa, ọ bụghị n’ụzọ anụ ahụ́? (Lev. 26:11, 12; 2 Ihe 6:18; Aịsa. 66:1; Mkpu. 21:2, 3, 22-24)
Olee ụdị anya mmiri na ihe mgbu nke na-agaghịzi adị? (Luk 8:49-52; Rom 8:21, 22; Mkpu. 21:4)